Work from home ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ... - Nanolabs Blog
ပုံမှန်ရုံးသွားရမယ်ဆို ရုံးချိန်မှီအောင် လုပ်ရတဲ့အတွက် စောစောထဖြစ်ပြီးတော့ တစ်နေကုန် လန်းဆန်းပြီး Productive ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အိမ်ကနေပဲ အလုပ်လုပ်ရမယ်ဆိုတော့ ရုံးသွားဖို့ အချိန်ယူစရာ မလိုတဲ့အတွက် နောက်ကျမှ အိပ်ရာထပြီး Computer ရှေ့မှာ Meeting ထိုင်နေပေမယ့် အရင်လို လန်းဆန်းတက်ကြွမှုမျိုး ရှိမနေနိုင်ပါဘူး။
၂. အလုပ်လုပ်မယ့် နေရာကို သေချာပြင်ဆင်သင့်ပါတယ်
ကိုယ်အလုပ်ထိုင်လုပ်မယ့် စားပွဲနေရာ ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်း သန့်ရှင်းသပ်ရပ်နေဖို့ လိုပါတယ်။ အဲ့ဒါမှသာ စိတ်က လန်းဆန်းပြီး တစ်နေကုန် တက်ကြွနေမှာပါ။ ဒါ့အပြင် အိမ်မှာ အလုပ်လုပ်နေပေမယ့် ဖြစ်သလိုမဝတ်ပဲ သပ်သပ်ရပ်ရပ်လေး ဝတ်စားပြီး ကွန်ပျူတာရှေ့မှာ ထိုင်ပြီး အလုပ်လုပ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ Online Meeting လုပ်ခါနီးမှ သပ်သပ်ရပ်ရပ်ဖြစ်အောင် အသည်းအသန် ပြင်ဆင်နေစရာလည်း မလိုအပ်တော့ပါဘူး။
၃. တစ်နေ့တာ လုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေ Task တွေ မှတ်ထားသင့်ပါတယ်
ရုံးမှာလို လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေ မရှိပဲ အိမ်မှာ သင်တစ်ယောက်တည်းရှိတယ်ဆိုတော့ ကိုယ့်စိတ်ကြိုက် အစီအစဉ်ဆွဲပြီး ချယ်လှယ်နေနိုင်ပါတယ်။ အိမ်မှာ ကိုယ်အနားယူချင်တဲ့အချိန် နားလိုက် ထိုင်ခုံမှာပြန်ထိုင်လိုက် အာရုံစူးစိုက်မှုတွေ ပျောက်နေတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အချိန်လေးတွေခွဲပြီး ဘယ်အချိန် ဘာလုပ်ရမလဲ၊။ ဘယ်အချိန်မှာ ခဏ Break လုပ်မလဲ သေချာသတ်မှတ်ပြီး လုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်။
၄. လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေနဲ့ အွန်လိုင်းကနေ အမြဲတမ်း ဆက်သွယ်နေပါ
အိမ်မှာ တစ်ယောက်ထဲ အလုပ်တွေဆက်လုပ်နေပြီး ရုံးကိစ္စအလုပ်တွေ ဘယ်လို Process တွေ ရှိနေလဲ အခက်အခဲတွေရှိရင်လည်း လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေ အားလုံးကို အသိပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သူတို့တွေနဲ့ အဆက်အသွယ်မပြတ်အောင် Online ကနေ Email နဲ့ဖြစ်ဖြစ် တခြား အွန်လိုင်း Tools တွေသုံးပြီး ဆက်သွယ်နေသင့်ပါတယ်။
၅. Social Media တွေနဲ့ အချိန်မဖြုန်းပါနဲ့
အိမ်မှာ ကိုယ်အလုပ်လုပ်နေလား မလုပ်ဘူးလား ကိုယ်ပဲသိနေတ​ော့ ရုံးမှာလို မဟုတ်တော့ ကိုယ်မသိလိုက်တဲ့ အချိန်မှာပဲ Social Media တွေသုံးပြီး အချိန်ကုန်ဆုံးနိုင်ပါတယ်။ အတတ်နိုင်ဆုံး အဲ့ဒီလို အပြုအမူတွေကို ရှောင်ပြီး အလုပ်ချိန်၊ အနားယူချိန်လေးတွေ သေချာ သတ်မှတ်ထားဖို့လိုပါတယ်။
၆. အိမ်က မိသားစု၊ အဆောင် အခန်းဖော် တွေကို နားလည်အောင် ရှင်းပြထားသင့်ပါတယ်
Work from home ဆိုတဲ့အတိုင်း အိမ်ကနေပဲ အလုပ်လုပ်နေတာဖြစ်ကြောင်း အိမ်မှာ အနားယူနေတာ မဟုတ်တဲ့အတွက် သင့်ရဲ့အလုပ်ချိန်ကို သူတို့က နားလည်ပေးအောင် ရှင်းပြထားသင့်ပါတယ်။ အဲ့လို မရှင်းပြထားရင် သင့်ကို အိမ်မှာ အနားယူနေတယ်ဆိုပြီး အိမ်အလုပ်တွေ ၊ တခြား ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ကိစ္စတွေနဲ့ အချိန်ကုန်စေမှာပါ။
ဒီအချက်လေးတွေအတိုင်း လုပ်ပြီး အခုချိန်မှာ COVID-19 ကို ကာကွယ်ဖို့ ကျွန်တော်တို့အားလုံး အိမ်မှာနေပြီး အလုပ်လုပ်ကြရအောင်။